Waxaan sugeynaa jawaab celin badan! | Waraaqaha
Tirada Faallooyinka 3078
Celcelis qiimeyn (4,89)
Susanna Langner	18 / 06 / 2021 Shaqada guriga
Aad ayaan ugu mahadnaqayaa kooxda iibka.
Nasiib darrose, shaqadaydii guriga ayaa ku lumay waxyaabo gaar ah awgood. Kadib waxaan ka helay Papernerds.de internetka
Waa inaan qiraa inaanan khibrad hore u lahayn arimahan waxaanan kalsooni ku qabaa kooxda.
Shaqaale aad ufiican, culeyska garbaha iga qaaday oo shaqadayda helay 3 maalmood kahor waqtiga kama dambaysta ah. Marwalba waan xiriiri jiray oo inta udhaxeysa waxaan kahelaa macluumaad ku saabsan inta shaqadaydu ahayd. Waad i badbaadisay ilbiriqsigii ugu dambeeyay.
WAAN SOO LAABAN
Hans	23 / 05 / 2021 shahaadada bachelor
Beluga	23 / 05 / 2021 shahaadada Masterka
Florian	22 / 04 / 2021 Shaqada guriga
Waxaan horeyba u qabtay seddex shaqo oo ay qabteen adeegga weyn. Maxaan ku dhihi karaa halkan waa xirfadlayaal dhab ah oo shaqada jooga. Saaxiibbaday ayaa sidoo kale halkan ku sameeyay.
Ku dar dib u eegis
rating 0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0 Farriin *
* Meel loo baahan yahay